Germany: Qofku waa diidii karaa qeyb shaqada ka mid ah diintiisa darteed | Somaliska
Af-Soomaali / Germany
Maxkamad Sare oo ku taala dalka Jermalka ayaa xukuntay in qofku uu diidi karo qeyb ka mid ah shaqadiisa haddii ay ka hor imaaneyso diintiisa, arintaan ayaa timid ka dib marii nin Muslima oo ka shaqeeya dukaanka ku yaala magaalada Kiel uu diiday in uu raseeyo dhalooyin qamri ah asagoo sheegay in diintiisu mamnuucayso in uu taabto qamriga. Ka dib diidmadiisa ayaa ninkaas shaqada laga cayriyay asagoo maxkamad u dacwoodey, hadaba maxkamada Sare ayaa xukuntahay in qofku uu diidi karo qeyb shaqada ka mid ah diintiisa dartiis waa haddii loo heli karo in uu shaqo kale ka qabto dukaanka. Kiiskaan ayaa qeylo dhaan ka dhaliyay Jarmalka ayadoo warbaahinta wadankaas ay cambaareeyeen go'aanka maxkamada oo ay sheegeen in arintaan ay qatartahay oo Muslimiinta ay wadada u fureyso. Wargeysyada qaar ayaa qoray in uusan Quraanku mamnuucay in la taabto Qamri balse cabitaankiisa la mamnuucay. Ma ahan markii ugu horeysay ee qof Muslima uu maxkamada la goro shirkadiisa, ayadoo Sweden ay ka dhacday in shirkada boostada ee UPS ay nin Muslima shaqadiisa ka cayrisay ka dib markii uu diiday in uu garka soo xiiro.
Germany: Qofku waa diidii karaa qeyb shaqada ka mid ah diintiisa darteed
Maxkamad Sare oo ku taala dalka Jermalka ayaa xukuntay in qofku uu diidi karo qeyb ka mid ah shaqadiisa haddii ay ka hor imaaneyso diintiisa, arintaan ayaa timid ka dib marii nin Muslima oo ka shaqeeya dukaanka ku yaala magaalada Kiel uu diiday in uu raseeyo dhalooyin qamri ah asagoo sheegay in diintiisu mamnuucayso in uu taabto qamriga.
Ka dib diidmadiisa ayaa ninkaas shaqada laga cayriyay asagoo maxkamad u dacwoodey, hadaba maxkamada Sare ayaa xukuntahay in qofku uu diidi karo qeyb shaqada ka mid ah diintiisa dartiis waa haddii loo heli karo in uu shaqo kale ka qabto dukaanka.
Kiiskaan ayaa qeylo dhaan ka dhaliyay Jarmalka ayadoo warbaahinta wadankaas ay cambaareeyeen go’aanka maxkamada oo ay sheegeen in arintaan ay qatartahay oo Muslimiinta ay wadada u fureyso. Wargeysyada qaar ayaa qoray in uusan Quraanku mamnuucay in la taabto Qamri balse cabitaankiisa la mamnuucay.
Ma ahan markii ugu horeysay ee qof Muslima uu maxkamada la goro shirkadiisa, ayadoo Sweden ay ka dhacday in shirkada boostada ee UPS ay nin Muslima shaqadiisa ka cayrisay ka dib markii uu diiday in uu garka soo xiiro.
Somalida Linköping oo la kulmay Xubno ka tirsan Migrationsverket
Maqaaxida Shanle Restaurang waa mid ku dayasho mudan
Waa maalinta Qaranka Sweden – Hambalyo!
February 28, 2011 at 07:05
Waa sax waana wax jira in uu qofku diidikaro wax diintisa wax udhimaya muslinkuna wax walba in uu banaysto dintu mafarayso